သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးအတွက် အစားအစာနှင့် သရေစာမုန့်တွေကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုကျွေးမလဲ? - Lifestyle Myanmar
သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးအတွက် အစားအစာနှင့် သရေစာမုန့်တွေကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုကျွေးမလဲ?
အဆင်ပြေနေတဲ့ သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
မျက်လုံးမှေးတဲ့သူတွေ အဖြစ်များသော မိတ်ကပ်အမှား (၅)ခု
အမျိုးသားတွေ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူဆီက တကူးတကလိုချင်တတ်သော အရာ (၇) ချက်
လူတစ်ယောက်ကို ဘာ့ကြောင့် ချစ်မိကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၂)ချက်
ဆရာကြီးတွေ၊ ဆရာမကြီးတွေပဲဖြေနိုင်မယ့် ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းတွေကို အတူတူဖြေကြည့်ကြရအောင်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အိတ်သယ်ဆောင်ပုံက ပြောပြမယ့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်း
သိပ်ကိုအတွေးလွန်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ???
ကျွန်မတို့ရဲ့ မိခင်တွေကို နာကျင်စေနိုင်တာကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်သင့်သော စကားလုံးများ
မနက်ခင်းအိပ်ရာနိုးတာနဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေမယ့် နည်းလမ်းများ
မေမေတို့ရဲ့ သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးဟာ သူ့ရဲ့ အစားအစာထဲကနေ အာဟာရ အလုံအလောက်ရရှိပါသလား? သူ့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ အစားအစားတွေကို မေမေတို့ သိပါသလား? ၃နှစ်အရွယ် ကလေးတွေဟာ လှုပ်ရှားမှုတတ်ကြွကြပြီး သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် စွမ်းအင်များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် သူတို့လေးတွေကို မှန်ကန်စွာ ကျွေးမွေးဖို့နှင့် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်များနှင့် သတ္တုဓါတ်များကို သေချာစွာ ရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မေမေတို့ကလေးကို အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးချင်ရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
၃နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေအတွက် အစားအစာ အမျိုးအစာ စုံလင်စွာ ရှိသင့်ပါတယ်။ မေမေတို့ ကလေးငယ်အတွက် အစားအစာရွေးချယ်ရာမှာ အမျိုးစုံလင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးဟာ ဒီအဓိကအစားအစာ အုပ်စုလေးခုကနေ အဟာရ အလုံအလောက်ရရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
ဆိုဒီယမ်နှင့် သကြားဓါတ်မြင့်မားသော၊ ပြုပြင်ထားသော အစားအစာများကို ရှောင်ရှားပြီး ကလေးငယ်ရဲ့ အစားအစာမှာ သဘာဝနှင့် ကုန်ကြမ်းများ ပိုမိုပါဝင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ထောပတ်သီး၊ ဆော်လမွန်၊ ဒိန်ခဲနှင့် အခွံမာသီးကဲ့သို့သော ကျန်းမာတဲ့ အဆီရွေးချယ်မှုများကို ထည့်သွင်းပါ။
၁။ အစားအစာကို တစ်ခါတည်းနဲ့ ပန်းကန်အပြည့် ထည့်ပေးမယ့်အစား နည်းနည်းစီခွဲကျွေးပါ။
၂။ အသားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဲ့သို့သော အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒါမှ ကလေးဟာ ဗိုက်ပြည့်နေပြီး တွေ့ကရာမုန့်တွေ မတောင့်တနိုင်တော့ပါဘူး။
၃။ အစာစားချိန်ကို သတ်မှတ်ပြီး ကျွေးပါ။ အချိန်မှန်မှန်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးလည်း မှန်ကန်စွာ စားပြီး ခဏခဏစားခြင်းမှ ရှောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ မေမေတို့ကလေးအတွက် အရောင်အသွေးစုံပြီး အမြင်မှာ စားချင်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အစားအစာများဖြစ်ဖို့ အွန်လိုင်းကနေ ကျန်းမာသော ချက်ပြုတ််နည်းများကို လေ့လာပါ။
၅။ မကျန်းမာသော အစားအစာများနေရာမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများကို အစားထိုးပါ။ ဥပမာ- ကလေးက ပီဇာကြိုက်သူဆိုရင် ပီဇာကို သံလွင်ဆီနှင့်အတူ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများထည့်ပြီး အိမ်မှာလုပ်ကျွေးပါ။
ရေက ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသောက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့ဖြတ်ပြီး နွားနို့တိုက်ကျွေးတဲ့အခါ တစ်နေ့ကို သုံးခွက်ထက်မပိုပါစေနဲ့။ သကြားများတဲ့ အချိုရည်များ၊ ဆိုဒါများ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် သံဘူးတွေ တိုက်ကျွေးခြင်းကို ကန့်သတ်ပါ။ ဒီအချိုရည်တွေမှာ သကြားဓါတ်တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ သကြားက ကလေးရဲ့ သွားကျန်းမာရေးအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးက သစ်သီးဖျော်ရည်ကို ပိုကြိုက်ပါက အစာတစ်ခုခုနှင့်တွဲပြီး ခွက်တစ်ဝက်လောက် တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ သရေစာစားတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာသော ဒီသရေစာတွေကို စမ်းကျွေးကြည့်ပါ။
ဒိန်ချဉ်နှင့် လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးရောကျွေးပါ။ နို့/ဒိန်ချဉ်နှင့် သစ်သီးကို ဖျော်ရည်လုပ်ပေးပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အများကြီးပါတဲ့ Multigrain ပေါင်မုန့်၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တို့ လုပ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ အသားနည်းပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများပါတဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေကို ကျွေေးနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မျက်ဝန်းကျဉ်းတာ/ကျယ်တာ၊ နှုတ်ခမ်းပါးတာ/ထူတာ၊ ပါးရိုးကားတာ၊ ပါးဖောင်းတာ စသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ ရှိကြပါတယ်။ မိတ်ကပ်က လူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်တွေကို ပေါ်လွင်အောင်ပြသနိုင်တဲ့ နည်းတစ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မျက်ဝန်းကျဉ်းတဲ့သူတွေ လုပ်မိတတ်တဲ့ မိတ်ကပ်အမှားတွေအကြောင်းကို ပြောပေးချင်ပါတယ်။ သင့်မျက်ဝန်းကို...
အခုချိန်မှာ ဟိုတယ်တွေက သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေကို ဆွဲဆောင်နေကြတာ အားလုံးအသိပါ။ ရေကူးကန်ပါတဲ့ဟိုတယ်က ရေကူးကန်ကို ဦးတည်ပြီး ဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ကြသလို Restaurant ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေကလည်း ဘူဖေးအစီအစဉ်တွေကို အပြိုင်အဆိုင် အသုံးချနေကြပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ...
မျက်လုံးတွေက စိတ်နှလုံးသားရဲ့ ပြတင်းပေါက်ဆိုရင် အသားအရေက ကျန်းမာရေးကို ဆုံးဖြတ်သိမြင်နိုင်တဲ့ အရေပြားအပေါ်ယံလွှာပါပဲ။ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အသားအရေစိုပြေဝင်းပမှုက ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ခရင်မ်တွေ လိုးရှင်းတွေက သင့်အရေပြားကို ခဏတာကြည့်ကောင်းရုံသာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိ အသားအရေလေးစိုပြေဝင်းပ နေချင်ရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့်...
ညဘက်အိပ်စက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းကြပ်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့အနားယူခြင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက် ပေါ့ပါးချောင်ချိတဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေကိုသာဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်စက်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူငယ်တွေအနေနဲ့ ညအိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ အတွင်းခံမဝတ်ဘဲ (သို့) အဝတ်မပါဘဲ ဘာလို့အိပ်သင့်သလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိပ်ပျော်စေတယ် အတွင်းအဝတ်အစားတွေမပါဘဲ အိပ်စက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို အအေးဓာတ်ဖြစ်စေကာ...